Bussiness | Popular News | Page 4
"လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်ကပေါ့ တန်းမြင့်ကော်ဖီအဖြစ်မထုတ်နိုင်သေးခင်းမှာတစ်တန်ကိုသိန်းသုံးဆယ်ဝန်းကျင်ဘဲဈေးနှုန်းရခဲ့ပေမယ့်တန်းမြင့်ကော်ဖီ ဖြစ်သွားချိန်မှာတော့ တစ်တန်ကို သိန်း(၁၂၀)အထိတောင်ပေါက်ဈေးရသွားပါတယ်"ဟု WIN ROCK International အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကဆိုသည် . . .
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၇)ဦးက ဆွေးနွေးပြီးကြတဲ့နောက်မှာ၊ အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ရယူတဲ့အစီအစဉ်မှာ အတည်ပြုဖို့သင့်မသင့် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်ပြီး အဖက်ဖက်ကအောင်မြင်ချောမွေ့နေချိန်ကျမှသာလျှင် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်သင့်ပြီး လတ်တလောအခြေအနေအရ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့ အကျိုးစီးပွားအတွက် မဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်းနှင့် သေချာစွာသုံးသပ်ပြီးမှသာ ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ၎င်းက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
"​ငွေ​ကြေးကဏ္ဍဟာ ကဏ္ဍ​တွေထဲမှာ တိုးတက်​မှုအရှိဆုံးကဏ္ဍဖြစ်​ပါတယ်​၊ ၂၁ဒဿမ ၉ရာခိုင်​နှုန်းအထိတိုးတက်​ခဲ့ပါတယ်​"လို့သူကဆိုပါတယ်​...
မွန်ပြည်နယ်က ထွက်ရှိသည့် ရာဘာများကို စင်္ကာပူနိုင်ငံက တန်ချိန် ငါးသောင်း ၀ယ်ယူမည်
"ဈေးနှုန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ ၀ယ်မယ်ဆိုတာလဲ မသိရသေးပါဘူး။ ပမဏကိုတော့ MOU ထိုးထားတဲ့သဘောပါ။ တန်ငါးသောင်းထုတ်ပေးရမှာပါ်''
"(၁၀၅)မိုင်ကနေ တစ်ရက်ကို ကားအစီးရေ(၁၃၀)ကျော်လောက် တင်ပို့နေရပါတယ်ဖရဲရောသခွားရောပါပါတယ်"ဟု မူဆယ်(၁၀၅)မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး ဦးလန်းဆန်းဦးက ဆိုသည် . . .
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒီထက် လူငယ်မျိုးဆက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ်ရှိနေပါတယ်
"မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Governmentခရီးစဉ်ကို (၂၀၀၄)ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါ(၁၃)နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဌာနတော်တော်များများမှာ Online Website များနဲ့ Online Application များရှိလာပြီးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို Onlineက နေလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဌာနလုပ်ငန်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်တော့ လက်ချိုးရေကြည့်လို့ရပါတယ်။အနည်းငယ်ဘဲရှိပါတယ်"ဟု ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်ကပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလအတွင်း တနိုင်းမြို့ အတွက် ဆန်ခွဲတန်း အိတ် ၃၅၀၀ ကျော် ဟာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ညမှာ ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘဏ္ဍာနှစ်အစမှ (၇)လအတွင်း နယ်စပ်စခန်းအသီးသီး၏ ကုန်သွယ်မှုပမာဏများကို ကာလတူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၅၀)ကျော်ခန့် လျော့ကျနေကြောင်း ............................